ကျောင်းကပွဲ၌ ကျောင်းသားများ ပွဲစည်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦး။ – SoShwe
Home/Other/Funny/ကျောင်းကပွဲ၌ ကျောင်းသားများ ပွဲစည်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦး။
ကျောင်းကပွဲ၌ ကျောင်းသားများ ပွဲစည်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦး။
So Shwe February 11, 2020	Funny Leaveacomment
ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် ကျောင်းကပွဲနဲ့ စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲတစ်ခု၌ နာမည်ကျော် Porn ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pornhub Theme Song ကို ဒရမ်ဖြင့်တီးခတ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အစပိုင်း၌ ကျောင်းသားအများစုသည် အဆိုပါသီချင်းကို မည်သည့်သီချင်းမှန်း ချက်ချင်းမသိရှိခဲ့ကြပေမယ့် နာမည်ကျော် Pornhub ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ Theme Song ဖြစ်နေသည်ကို သိရှိလိုက်ချိန်၌မူ သံစဉ်နဲ့အတူ ပျော်ပျော်ပါးပါးကခုန်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုပါဗီဒီယိုကို TikTok ပေါ်၌ တင်ထားခဲ့ပြီး TikTok အသုံးပြုသူတစ်ဦးက အဆိုပါကျောင်းသားကို ကျောင်းထုတ်ပစ်ရန်အထိ ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ Pornhub သီချင်းကို အားရပါးရ တီးခတ်ဖျော်ဖြေနေသည့် ကျောင်းသားရဲ့လုပ်ရပ်အပေါ် “ဒီကလေးအနေနဲ့ အခုလိုကျောင်းပွဲမှာ Pornhub ရဲ့ အစသီချင်းကို တီးခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျောင်းကထုတ်ပယ်သင့်ပါတယ်။ တကယ်ကို သောက်တလွဲလုပ်ရပ်ပါ။” ဟု မှတ်ချက်ပြု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အခြားသော TikTok အသုံးပြုသူတစ်ဦးကမူ “ခင်ဗျားတို့သိရင် သိမှာပေါ့။” ဟု မတူညီသည့်အမြင်မှ မှတ်ချက်ပြုရေးသားသွားခဲ့ပါတယ်။ သို့ရာတွင်မူ အဆိုပါဗီဒီယိုအတွင်း၌ ဒရမ်တီးဖျော်ဖြေနေသည့် ကျောင်းသားရဲ့ပုံရိပ်ကို သဲသဲကွဲကွဲမြင်ရခြင်းမရှိသလို မည်သည့်ကျောင်း၌ ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဆိုသည်ကိုလည်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါ Pornhub ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် အပြာကားနဲ့ပတ်သက်၍ နာမည်ကြီး ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူကြီး၊ လူငယ်မရွေး အားပေးသူပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ေက်ာင္းကပဲြ၌ ေက်ာင္းသားမ်ား ပြဲစည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲတ့ဲ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး။
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းကပဲြနဲ႔ စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပဲြတစ္ခု၌ နာမည္ေက်ာ္ Porn ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ Pornhub Theme Song ကို ဒရမ္ျဖင့္တီးခတ္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အစပိုင္း၌ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ အဆိုပါသီခ်င္းကို မည္သည့္သီခ်င္းမွန္း ခ်က္ခ်င္းမသိရွိခဲ့ၾကေပမယ့္ နာမည္ေက်ာ္ Pornhub ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ Theme Song ျဖစ္ေနသည္ကို သိရွိလိုက္ခ်ိန္၌မူ သံစဥ္နဲ႔အတူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးကခုန္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အဆိုပါဗီဒီယိုကို TikTok ေပၚ၌ တင္ထားခဲ့ၿပီး TikTok အသံုးျပဳသူတစ္ဦးက အဆုိပါေက်ာင္းသားကို ေက်ာင္းထုတ္ပစ္ရန္အထိ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။ Pornhub သီခ်င္းကို အားရပါးရ တီးခတ္ေဖ်ာ္ေျဖေနသည့္ ေက်ာင္းသားရဲ႕လုပ္ရပ္အေပၚ “ဒီကေလးအေနနဲ႔ အခုလိုေက်ာင္းပြဲမွာ Pornhub ရဲ႕ အစသီခ်င္းကို တီးခတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းကထုတ္ပယ္သင့္ပါတယ္။ တကယ္ကို ေသာက္တလဲြလုပ္ရပ္ပါ။” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
အျခားေသာ TikTok အသံုးျပဳသူတစ္ဦးကမူ “ခင္ဗ်ားတုိ႔သိရင္ သိမွာေပါ့။” ဟု မတူညီသည့္အျမင္မွ မွတ္ခ်က္ျပဳေရးသားသြားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္မူ အဆုိပါဗီဒီယိုအတြင္း၌ ဒရမ္တီးေဖ်ာ္ေျဖေနသည့္ ေက်ာင္းသားရဲ႕ပံုရိပ္ကို သဲသဲကဲြကဲြျမင္ရျခင္းမရွိသလို မည္သည့္ေက်ာင္း၌ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းဆုိသည္ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အဆုိပါ Pornhub ဝက္ဘ္ဆုိက္သည္ အျပာကားနဲ႔ပတ္သက္၍ နာမည္ႀကီး ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူႀကီး၊ လူငယ္မေရြး အားေပးသူပရိသတ္အခိုင္အမာရရွိထားသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
Previous ?????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????? (??) ??????
Next ???????????????? Galaxy Z Flip ???????????? ??????????????????? Samsung
၁။ လူအချို့ကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ဝံပုလွေပုံတက်တူးထက် Vape ပုံတက်တူးတွေကို ထူးထူးဆန်းဆန်း ရေးထိုးလာကြပါပြီ။ ၂။ သူများကဆေးထိုးလိုက်တဲ့ ကိစ္စကိုလည်း အဟုတ်ကြီးထင်ပြီး တကယ်လိုက်လုပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း အထူးအဆန်းမြင်တွေ့ရမှာပါ။ …